Control Quality - Dongguan Ruizheng Industry Co., Ltd
Thina Ubeka ugxininiso ekuqondeni iinkcukacha kunye neemfuno umgangatho nomthengi, isicelo ulawulo olululo ukuvelisa inxalenye kanye kwixesha lokuqala.
Umgangatho ophezulu kumgangatho kwenziwa kwaye ilondolozwe izibonelelo zethu eyomeleleyo eziquka latest izixhobo zokukala ezifana Air izxhobo zokulinganisa kunye nezinye Instrument yokulinganisa rhoqo ngokufanelekileyo ukukala. Wazala yokulinganisa, Micrometer, Verniers njl Ukuba izibonelelo CMM, iprofayili wokudlala imidlalo uvavanyo Special. ukuzinikela kwethu Umgangatho kukuba zonke lokuveliswa zoqhagamshelwano yenziwe Ruizheng Precision Machining zingqinwe ukuba ISO 9001: 2000 Ekubeni izixhobo zokukala eziphambili kunye ingcibi elitheni ukunika abathengi yomhlaba kakhulu kakuhle, kakhulu-uqoqosho, aphezulu iimveliso -quality.
Amanyathelo Control Quality
- zolawulo olunobulunga Itotali (TQM)
- Inkqubo Improvement Continuous
- Employee Iinkqubo Uqeqesho
- nkqo Udityaniso Iinkqubo
- Utyalo-mali Umgangatho Wolawulo Equipment Latest
- Umgangatho Iinkqubo Inkuthazo
- Ukuzibophelela kombutho ku Quality
Ukusuka Raw Material engenayo kwimveliso ngolwandle, siyakwazi onke amanyathelo ale nkqubo yokuvelisa ukuba inshorensi iimveliso zenziwa kubaxumi iinkcukacha, Yonke imveliso kufuneka zidlule iitshekhi 4 yonke le nkqubo:
Ukuhlolwa izinto okrwada
Xa kuhlolwa processing
Wacela ukuba umgangatho ephambili wethu wokuqala, kunye nokuphunyezwa ISO9001: 2000, lo emgangathweni inkqubo yethu lomgangatho uzinzo umgangatho esikufumanayo ukuba intembeko abathengi bethu iminyaka. Ruizheng Precision Machining onokukunceda ufumane umgangatho uphezulu ngexabiso ilungileyo okufowuna lemveliso yakho China.